T shpe ခြေထောက်များနှင့် mouse pad ပါပုံစံ LY 140cm ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်း ၀ ယ်သူလက်ကား 140cm Gamer စားပွဲ TwoBlow
T ပုံစံခြေထောက်များနှင့် mouse pad ပုံစံ LY 140cm ရှိသော 140cm Gamer စားပွဲ
အရွယ်အစား 140 * 60 * 75 စင်တီမီတာ
အရောင်: T ပုံသဏ္ာန်
စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 25.8 ကီလိုဂရမ်
၁။ LED စားပွဲခုံများ၏ LED မီးများကထူးခြားသောဂိမ်းကစားခြင်းကိုဖန်တီးပေးသည်။
၅၅ လက်မ gaming table ၏ ၂. ကျယ်သော desktop သည်မော်နီတာ ၃ လုံးအတွက်လုံလောက်သည်။
3. Smooth MDF desktop သည်ရေစိုခံနိုင်ပြီးခြစ်ရာဒဏ်ခံနိုင်သည်။
၄။ ကွန်ပျူတာကစားခုံ၏ T-shaped frame သည်တည်ငြိမ်ပြီးတာရှည်ခံသည်။
၆။ ဒီဇိုင်းအားလုံး ergonomic နှင့် multi-function ဖြစ်သည်။
ငါတို့က Amazon မှာအကောင်းဆုံးဂိမ်းစားပွဲတွေကိုဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးထုတ်လုပ်နေတာသေချာချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တီထွင်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းများ၊ ခိုင်မာသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဂုဏ်ယူသောကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သည်။
၅၅ လက်မကြီးမားသော Desktop
သင်၏အလုပ်လုပ်နိုင်သောဂိမ်းကစားခုံကိုသင်၏ဂိမ်းခန်း၊ အိမ်၊ ရုံး၊ workstation၊ လေ့လာရေး၊ ဧည့်ခန်း၊ သို့မဟုတ်သင်ကစားလိုသည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဤဂိမ်းစားပွဲနှင့်သင်၏ဂိမ်းကစားကွင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
• T-Shaped ဒီဇိုင်း: ခံနိုင်ရည် & ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေး
•စားပွဲအရွယ်အစား: 55” (W) x 23.6” (D) x 29.5” (H) / 140*60*75cm
• 8 RGB Lighting Modes များ
•ကြီးမားသော Full Desk Mouse Pad
•ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ laminated tabletop: ရေစိုခံ၊ ခြစ်ရာကိုကာကွယ်ပေးသည်
•အဆင်ပြေသောနားကြပ်ချိတ် & ခွက်ကိုင်ဆောင်သူ & ကြိုးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
ထိန်းချုပ်နိုင်သော RGB FIBER OPTIC LIGHTING
1. ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော TwoBlow gaming desk panel တွင် fiber optic rgb led မီးများပါ ၀ င်ပြီးစွဲငြိဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသည်။
၂။ အလွန်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်း-ခိုင်ခံ့သောပွင့်လင်းမီးအားသုံးအင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော Optical core material သည်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းနှင့်ကြာရှည်ခံခြင်းကဲ့သို့အရည်အသွေးပြဿနာများမရှိအောင်သေချာစေနိုင်သည်။
3. အကွိမျမြားစှာအလင်းရောင် Mode ကို Options ကို: 8 Single Colors, 8 Single Colors 'Changing, RGB Lights Changing & Strobe Lighting ။
၄ င်းအရည်အသွေးတစ်လျှောက်လုံးတွင်သင်၏ကစားသူများ၏အမှတ်အသားကိုဖော်ပြရန်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာမျက်နှာပြင်နှင့် RGB LED မီးတို့ဖြင့် TwoBlow သည်အတွင်းရောအပြင်ရောပါအကောင်းစားဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Gaming Style
TwoBlow ဂိမ်းစားပွဲသည် virtual ကိုအစစ်အမှန်သို့ပေါင်းစပ်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်မှုကိုဘဝသို့ပြောင်းပါ၊ ကစားသူတိုင်းကိုအိမ်၌ပင်ကစားစေပါ၊ ကစားသူတိုင်းကိုအိမ်၌ပင်ကမ္ဘာကြီးကိုတွေ့ကြုံခံစားစေပါ။
ESGAMING ဂိမ်းစားပွဲနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရုံးခန်းနေရာကိုဖန်တီးပါ။ နေရာချွေတာသောစားပွဲခုံမျက်နှာပြင်သည်သင်၏မော်နီတာ (သို့) လက်ပ်တော့အတွက်စာရွက်များနှင့်အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရုံးသုံးပစ္စည်းများအတွက်နေရာများစွာပေးသည်။ စတိုင်ကျသောဒီဇိုင်းသည်ဤစားပွဲသည်မည်သည့်အိမ်သုံးရုံးအတွက်မဆိုပြီးပြည့်စုံသောအပြင်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်သည်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရစေသည်။ ထိုင်ခြင်းနှင့်ရပ်ခြင်းအကြားပြောင်းနေစဉ်ခါးနာခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးပြဿနာများ၊ အ ၀ လွန်ခြင်းနှင့်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာများဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်။
Cable Management Grommets များ
ဘယ်နှင့်ညာတွင်ကေဘယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါက် ၂ ခုပါရှိသောကြောင့်ကေဘယ်တပ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသည်
• ၁ x RGB Gaming Desk
• 1x အပြည့်ဖုံးထားသော Mouse pad
• 1x ဖလားကိုင်ဆောင်သူ
• 2x Headphone ချိတ်ပါ
• 1x Stuff သိုလှောင်မှု
• 1 x ကို USB Port ကို
• 1x တပ်ဆင်ခြင်းကိရိယာ
• 1x စာရွက်စာတမ်းတပ်ဆင်ပါ
အရောင်: T ပုံသဏ္ာန် အ | အရွယ်အစား ၅၅ "
ကုန်ပစ္စည်းအတိုင်းအတာများ ၅၅ x ၂၃.၆ x ၂၉.၅ လက်မ/ 140*60*75cm
ပစ္စည်းအလေးချိန် ၄၉ ပေါင်
ယခင်: Remote control model ZA ပါသော RGB Gamer Desk
နောက်တစ်ခု: R ပုံသဏ္economyန်စီးပွားရေးကစားပွဲစားပွဲခုံပုံစံ GT-01